संसद विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रियो नेकपा, पुनर्स्थापना गराएरै छाड्ने उद्धघोष | जनदिशा
संसद विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रियो नेकपा, पुनर्स्थापना गराएरै छाड्ने उद्धघोष
काठमाडौँ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सडक संघर्षमा उत्रिएको छ। देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार काठमाडौँमा बृहत् जनप्रदर्शन गरेको हो ।
काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र्यालीसहित निस्केको जुलुस भृकुटीमण्डपमा पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो। बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कलंकको टीका लगाएको बताए । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नु संविधानमाथिको बलात्कार हुने भन्दै उनले इतिहासले ओलीसंग जवाफ माग्ने बताए ।
‘केपी ओलीले इतिहासमा कलंकको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन । आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ भनेर उनले आफैले नभनेसम्म इतिहासले र नेपाली जनताले माफी दिने छैनन्’,उनले भने।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेको पनि बताए ।‘ओली संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी हो भन्ने मलाई थाहा थियो,’ उनले भने, ‘उनको मनले मानेको थिएन, तर जनताको आँधीहुरी आएपछि त्यसैमा बगिदिएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो।’ उनले ओली प्रवृत्ति बेलैमा बुझ्न नसकेको भन्दै क्षमा याचना पनि गरेका ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको बरु ओली सरकार भंग भएको बताए। संविधान भन्दा माथि कोहि नहुने भन्दै उनले संविधानको रक्षा र ओली प्रवृतिका विरुद्ध संगठित संघर्षका लागि आव्हान गरे ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताले बनाएको संविधान कुल्चेर संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले अहिलेको संघर्ष ओली प्रवृतिका विरुद्ध भएको पनि बताए ।
‘निरंकुश केपी ओली एण्ड प्रवृत्तिको आयु पुग्यो । पुस ५ गतेका दिन वामपन्थी भनिएका नेताले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । के त्यो राजनीतिक, संवैधानिक हिसाबले उचित छ ? हाम्रो आन्दोलनको चाहना अनुरुप छ ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ । असंवैधानिक कदमलाई अस्वीकार गर्छौं,’ नेपालले भने ।
नेपालले ओलीले अहिलेको परिवर्तन स्वीकार गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला गणतन्त्रप्रति खिसिटिउरी गरेको स्मरण गर्दै उनले ओली अर्काले ल्याएको परिवर्तनको लाभ लिएर परिवर्तनविरुद्ध उभिएको बताए ।
‘राजाविरुद्धको आन्दोलनलाई उहाँ बयलगाढा चढेर वासिंटन डीसी पुगिँदैन भन्दै खिसिटिउरी गरिरहनुभएको थियो,’’ नेपालले भने, ‘‘उहाँमा गणतन्त्रप्रति अपनत्व छैन, यो संविधानप्रति सद्‍भाव छैन र यो व्यवस्थाप्रति सम्मान पनि छैन ।’’
विरोधसभालाई अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै संसद पुनर्बहाली नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा पनि गरेका छन् । ओलीको कदमलाई निरंकुश, प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक भन्दै उनीहरुले ओलीले राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल)ले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
Previous Previous post: साफ फुटबल बंगलादेशमा हुने
Next Next post: ‘शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा ओलीले संसद विघटन गरेका हुन्’